जनमतको कसीमा तराजु र बराजु
संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो संसददेखि प्रदेशको निर्वाचन अपार सहभागिता र उत्साहका साथ सम्पन्न भयो । राजनैतिक प्रक्रियाका रुपमा नेपालको यो अपार सफलता हो र यसैबाट सविधान कार्यन्वयनको चरण शुरु हुन्छ । यस अर्थमा विदेशमा बसेर “नेपाल खत्तम भयो, नेताहरुले खत्तम पारे” भनेर कमेन्ट गरि नथाक्नेहरु प्रति मेरो घोर असहमति छ ।
संसारका थुप्रै मुलुकहरु छन् जहाँ दशकौं द्धन्दको भूमरीमा फसेर, ठूलो सकस मोलेर, हजारौं मानिसहरुको बलिदानपश्चात मात्र निकास पाएको इतिहास हामीले पढेका छौं । अझै पनि अफ्रिकी तथा मध्यपूर्वी देशहरु जहाँ अकल्पनीय द्वन्दको शिकार बनेका छन् र निकास अनिश्चित जस्तै देखिन्छ ।
नेपाल आज यो स्थितिसम्म आइपुग्दा बिगतलाई एकछिन हेरेर मनन र उचित मूल्यांकन गरिएन भने बलिदान गर्नेहरुप्रति अन्याय हुने छ । किनकि हामीले दिन/रात आलोचना गरेका पात्रहरुले पनि राजनैतिक निकास दिन थुप्रै समय र शक्ति खर्चेका छन् । भलै उनीहरुको प्रयासले सार्थक रुप पाएनन् होला । २०४६/४७ को आन्दोलनले करिब ३० वर्षे एक दलीय पञ्चायती व्यबस्था समाप्त पार्दै संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र राजनैतिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको हो ।
त्यो संक्रमणलाई नेपालले तत्काल सहजै व्यबस्थापन गर्न सफल भएकै हो । तर करिव ५ वर्ष नबित्दै देश आन्तरिक र बाह्य कारण डरलाग्दो जनयुद्धमा फस्यो ।
जुन १० वर्षसम्म रह्यो । त्यो बिकराल समयले देशलाई आर्थिक र राजनैतिक रुपमा दशकौं पछाडि धकेल्यो । देशको पूरै संयन्त्र नेपाली नेपाली मै एक अर्काको हत्या गर्नमा, संरचना ध्वस्त गर्नमा खर्च भयो ।
राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भई जब २०६२/६३ को आन्दोलन भयो र सोही आन्दोलनले गर्दा करिब २४० वर्षदेखि चलिआएको नेपालीहरुको एकता र सद्भावको केन्द्रबिन्दु मान्दै आएको राजतन्त्रको जग हल्लियो । अन्ततः पहिलो संबिधानसभाले यसलार्ई उखेलेरै फाल्यो । जब राजतन्त्र समाप्त भयो तब नेपालमा एक प्रकारको भ्याकुम स्थितिको सिर्जना आयो । माओवादी द्धन्दकालमा बेचिएका थुप्रै सपनाहरुको उभार गणतन्त्र, स्वायत्तता, आत्म निर्णयको अधिकार, आरक्षण तथा पहिचान आदि आदि विभिन्न रुपमा सतहमै आउन थाल्यो ।
देशको समृद्धिका लागि एउटा राजनैतिक दर्शनले भन्दा जाति जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र बर्गीय बिषयले राज्यको ध्यान खिच्न थाल्यो । फलस्वरुप संबिधानसभाको पहिलो ४ वर्षे अवधिमा बहुप्रतिक्षित नेपालको संबिधान बन्न सकेन । नेपालीहरुले आशा मारेनन् दोश्रो संबिधान सभामा नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो दलको रुपमा जनादेश दिए र अन्ततः २०७२ असोज १ गतेका दिन संबिधानसभाको दुई तिहाइ भन्दा ठूलो बहुमतले संघीय गणतन्त्र नेपालको संबिधान जारी गर्यो । तर यसमा सबैको सहमति जुटाउन देशले सकेन । समन्वय गर्ने एउटा दह्रो शक्तिको अभावमा नेपाल गृहयुद्ध जस्तो बिकराल परिस्थितिबाट मुस्किलले बच्न सफल भयो ।
हो, यहाँ कर्मचारी र राजनैतिक संयन्त्रको मिलेमतोमा देश लुट्नेहरुको कमी छैन । राजनैतिक अन्योल रहेको संक्रमणकालमा नेपालको जर्जर आर्थिक स्थिति बन्नु यी दुई समूह नै जिम्मेवार छन् । तर यसमा सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्न मिल्दैन । संसारमा राजनीतिक संक्रमणकाल नसकिएसम्म विकास शुरु हुँदैन । भलै जनअपेक्षा अनुसार भएनन होलान तर तिनै राजनीतिक दलका नेताहरुले दिनरात नसुतेर, नखाएर काम नगरेको भए थुप्रै समस्याहरुलाई चिरेर २०७४ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा सबै तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भई देश सम्पन्नता, समृद्धि र स्थायित्व तिर लम्किने थिएन ।
सायद कसैले सोचेको थिएन होला राजतन्त्रको बर्हिगमन पश्चात देशले भोग्नु परेको पीडाको सहज निकास यसरी निस्कन्छ भनेर ।
माओवादी द्धन्दको राजनैतिक समाधान, शिविरका लालसेनाको बिदाइ, वाईसिएल निस्तेज, एक मधेश एक प्रदेशको रुपमा आएको मधेश आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी, जातिय पहिचान सहितको संघीय राज्यको माग, नेपालको झण्डादेखि नामै परिवर्तन गर्ने उद्दण्ड प्रवृति र बिदेशीहरुको खेल मैदान बन्दै गएको नेपाल देश कतै इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने भयाबह स्थिति हामी सबैले देखेका हा बिगतमा । यसको सहज निकास निकाल्न खट्ने ती नेताहरुलार्ई हामीले गालि मात्र गर्नु कदापि न्यायसंगत हुँदैन ।
यावत् समस्याहरुको उचित व्यबस्थापन गर्दै आजको स्थितिमा आइपुग्नु भनेको नेपालले राजनैतिक रुपमा अपार सफलता प्राप्त गर्नु हो भन्न कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन । त्यति हुँदा हुँदै पनि यदि त्यसभित्रै कसैले जगन्य अपराध गरेका छन् भने बालकृष्ण ढुंगेल जस्तै ढिलो चाँडो कानूनको कठघरामा आउने छन् । त्यसको लागि देश राजनीतिक व्यवस्थामा स्थायित्व र कानूनी राज्यको बाटोमा जानु पहिलो आवश्यकता हुन्छ । समग्रमा नेपाली जनता सकारात्मक र धैर्य छन् ।
अझै पनि राजनैतिक दलहरुले नै देशको समस्याको निकास दिन सक्छन् भन्नेमा बिश्वास गर्दछन् । हालै सम्पन्न स्थानिय निकाय, प्रदेश र संसदको निर्वाचनमा त्यस्तै देखियो । स्थायित्व र समृद्धिका लागि नेपाली जनताले बाम गठबन्धनलाई आरामदायी बहुमतको स्थाई सरकार गठन गर्न र नेपाली कांग्रेसलाई सबल प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनादेश दिएका छन् । सबैले आफ्नो भूमिकामा इमान्दार भएर काम गर्ने हो भने अबको १० वर्षमा नेपालले आर्थिक समृद्धिमा लामै फड्को मार्ने छ ।
तराजु र बराजुले सोच्नु पर्ने
करिब २० वर्षसम्म माथि उल्लेखित पेचिला बिषयहरुमा गुमनाम यो विवेकशील साझा गठबन्धन अहिले जनताको राजनीतिक दल तथा नेताहरुप्रतिको आक्रोशको फाइदा उठाई जनताको समर्थन आँफूतिर खिच्न पाइन्छ कि भनि “देश हामीले चलाउछौं” भन्दै आउनुलाई ९० मिनेटको खेल खेल्ने खेलाडीलाई पछाडि पार्दै पेनाल्टी हान्ने बेलामा गोल हान्न तम्सिए जस्तो देखिन्छ । त्यो खेललाई जनता कसैले स्वीकार गर्न सकेनन् । यदि रबिन्द्र मिश्रले राजनीति गर्छु र पार्लियामेन्टमा आफ्नो आवश्यकता महसुश गर्थे भने उनको उम्मेदवारी राजनैतिक समझदारीमा आउँदा राम्रो हुन्थ्यो होला तर त्यो भएन । फलतः प्रकाशमान सिहसंग सिंग जुदाउँन जाँदा परिणाम मिश्र कै लागि प्रत्युत्पादक हुन पुग्यो ।
विवेकशील साझा गठबन्धन त परिक्षण गर्न आएका हुन्, जसरी आय त्यसरी नै जान्छन्, यदि राजनैतिक दलहरुले इमान्दारी पूर्वक जनादेश अनुसार काम गरे भने । तर आधा शताब्दी भन्दा लामो समयसम्म एकछत्र राजनैतिक प्रभाव राख्ने नेपाली कांग्रेस आफ्नो बराजु प्रवृतिले गर्दा नराम्रो संग पछाडि परेको छ यो निर्वाचनमा ।
यस्तो खालको कमजोर प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको लागि राम्रो कदापि होइन । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस नेपालको माटोमा जन्मेर नेपाली परिवेशमा मुलुकको समृद्धि र सामाजिक न्यायका खातिर स्थापित दल हो ।
बिपीले त्यसै भनेका थिएनन् “देश को बारेमा केहि दुबिधा भयो भने एक मुठी माटो लिनुस र सोच्नुस अनि जे गर्दा ठिक लाग्छ त्यहि गर्नुस” भनेर । तर कांग्रेसको लिगेसी सम्हाल्ने नवआधुनिक बराजुहरुको प्रवृति देख्दा उनीहरु मात्र यो गौरवशाली दल नेपाली कांग्रेसका ठेकदार हुन् । यिनीहरु जनमुखी भन्दा पनि नेतामुखी र केन्द्रमुखी बन्न पुगे । जनताको सेवा गरेर चुनाव जित्नु भन्दा मरिहत्ते गरेर उम्मेदवारको टिकट उम्काउन उनीहरुका लागि ठूलो कुरा बन्न पुग्यो ।
लामो समयदेखि गूट र फूटले गाँजेको नेपाली कांग्रेसका निर्णायक निमित्त नायकहरु लाजै पचाएर निष्ठावान कार्यकर्तालाई बेवास्ता गर्दै आँफू, श्रीमती, नाता गोता तथा अरौटे भरौटेलाई टिकट सुरक्षित गर्न बराजु सैलिमा निबस्त्र र निर्लज्ज उत्रिए । परिणामत जनताले नेपाली हावापानी, माटो सुहाउँदो दल नेपाली कांग्रेसको सद्मामा चीन, रसियाबाट आयातित दर्शन कम्युनिष्टलाई देशको सत्ताको साँचो दिन बाध्य भए ।
बाम गठबन्धनको अहिलेको जनमत उनीहरुले केहि चमत्कार गरेर आएको होइन । तर पक्कै पनि नेपाली कांग्रेसको कमजोरीका कारणले भने हो । कांग्रेसले आफ्नो पहिचान पूरै बामहरुलार्ई समर्पण गरेको छ । लामो इतिहास बोकेको मूल पार्टीको पहिचान बाम गठबन्धन भन्दा के फरक छ ? कसैले जनतामा गएर बिस्तार बताउन सकेको छ ? छैन, किन कि उनीहरुको मन मस्तिस्कमा सत्ता र शक्ति बरदान होइन बलिदान हो भन्ने बिर्सेका छन् यी रहिसहरुले ।
समयले तराजु र बराजु दुवैलाई सबक सिकाएको छ । यिनीहरुको अबको नयाँ बाटो भनेको जनमत अनुसार वामले सत्ता र काँग्रेसले बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनुको विकल्प छैन । यन्यथा पुरानै रोगबाट देश ग्रसित भयो भने जनता मान्न तयार छैनन् । सत्ताकै छिनाझप्टिमा ३० वर्षमा ३० वटा सरकार बन्यो । त्यसैले अबको बाटो भएका उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै संघीय संरचना अनुसार मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु पर्दछ । तव मात्र प्रवासमा रहेका लाखौं हरिया राहदानीवाहकहरुले आफ्नो मातृभूमि प्रति गौरब गर्ने छन् र विदेशीको सम्मान आर्जन गर्ने छन् ।
(लेखक : द नेपाली टाइम्स अस्ट्रेलियाका प्रकाशक हुन्)
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुष १९, २०७४ ०८:५९:०१